3 Solutions si iPhone kaabta Notes on Computer
Dadka Kuwa had iyo jeer waxaa ka buuxa fikrado ogoleyn in fikrado kuwa ay ka qiimo hoos meel ay si fudud la raadsan karaa xusay. Tageen maalmahaan marka aan isticmaalo in ay isticmaalaan buugaagta in ay sii aaraa'da iyo wax aanu qorsheynayno inaanu sameyno. Maalmahan, barnaamijyadooda telefoonka ayaa la wareegay go'iisii ​​oo ay ku shaqeyn karaan si fudud gaar ahaan dadka isticmaala telefoonka iPhone iyo Android. iPhone heshay app note in sameeya oo Sixira idiin laakiin kuwa qoraalada muhiim baaba'aan karaa mar kasta oo aad sameyn hagaajinta ah ee. Si looga hor, waxa ugu fiican in la sameeyo waa in ay dib u kor qoraalada ee computer ah. Sidaas, maxay yihiin hababka ugu wanaagsan ee ay arrintaas?
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka (kabashada xogta iPhone) waxaa loogu talagalay la shaqo ee soo kabsaday content tirtiray ka shiidaa qalab kasta macruufka halkaas. Waxay bixisaa adeegyo tayo leh soo kabashada ogolaada in dadka isticmaala inuu ka soo kabsado files ka qalab macruufka ah si toos ah ama ka iCloud ama Lugood gurmad ah. Qurux waa in software waa la jaan qaada xataa macruufka dambeeyay qalabka-fudud bixisaa xal buuxa, halka in isha lagu hayo oo tayo leh. Si qoraalo ka qalab ah oo xusuusta ayaa la tirtirayaa wareejiyo, waxaad u baahan doontaa inaad hore gashato this.
Tallaabo 1: Ku rakib iyo abuurtaan Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Waxaad ka heli kartaa version maxkamad ka badhamada download hoos ku ah. Waxa ugu wanaagsan waa in ay tahay la jaan qaada iPhone 6, iPhone 6 Plus, macruufka 9 iyo versions badan oo kale ah iPhone. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay hubiyaan in aad kala soo bixi version la jaan qaada OS aad ordaya-Windows ama Mac. Tallaabada xigta waa in ay gashato oo abuurtaan. Connect aad telefoon si kombiyuutarka aad ku rakibtay software ee la isticmaalayo xadhig USB ah.
Talaabada 2: Sawirka Device macruufka iyo Save Notes ah in aad damisid
Tallaabada xigta waa in ay doortaan hab soo kabasho ku xiran tahay meesha aad qoraalada gurmad waxa lagu kaydiyaa. Haddii aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan Notes ka qalab si toos ah. Inaad doorato soo kabsado Device macruufka ka dibna riix on Scan .
Sug hanaanka in la dhameystiro iyo qaybaha qaab interface soo kabsaday. Riix si aad u hubiso on category magacaabay Notes .
Riix Ladnaansho si loo badbaadiyo qoraalo aad u your computer.
La jaan qaada dhammaan qalabka macruufka
Waa sahal in la rakib
Waxaa loo isticmaali karaa in labada Mac iyo Windows
Mid ka mid ah ayaa ay u soo iibsadaan si ay u helaan astaamaha buuxa
Isticmaal Leawo macruufka Data Recovery Tool
Tani waa qalab ayaa degtay ka mid ah software ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada xogta macruufka. Software waa mid aad wax ku ool ah in la gaarsiiyo adeegyo tayo ee boqortooyadii reer iPhone inay kala iibsiga file computer ma aha oo kaliya. Si aad u isticmaasho software this si ay u gudbiyaan qoraalkaaga aad PC, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo iyo rakibi waa in computer diirada ugu horeysay. Software ayaa xor u yahay inuu kala soo bixi oo isku day ka www.leawo.org
Waxaa jira laba hab uu ka soo xusho-Mac iyo Windows oo macnaheedu yahay waxaad u baahan doontaa in aad doorato oo ku xidhan computer bartilmaameed aad isticmaalayso ah. Marka aad soo bixi, gashato oo abuurtaan. Connect qalab macruufka isticmaalaya cable USB in kombiyuutarka ah oo guji Start ee xarunta of interface software ah.
Software wuxuu bilaabi doonaa falanqeeyo qalabka iyo guraan content aad u. Marka scan la joojiyo, waxaad yeelan doontaa 12 qaybaha on galeeysid bidix ee qalabka. Riix si aad u hubiso on Notes .
Riix Ladnaansho .
Dooro folder caga si loo badbaadiyo qoraalada ee kombiyuutarka. Riix Go si loo badbaadiyo Xusuusaha meesha.
User interface olaga
Isticmaal Syncios Transfer Software
Tani waa qalab kale oo ka sii fiican tahay marka la eego dadka isticmaala tayada macruufka adeegyada kala iibsiga file siiyo. Waxaad ka faa'iidaysan karaan oo ay ku oolnimada ay u isticmaaleeysay in ay Notes ka iPhone wareejiyo PC ah. Wax First ugu horeysay oo sida oo kale qalab, waa in aad kala soo bixi software si aad PC loo isticmaalo. In sidaa la yeelo, download software ka http://www.syncios.com oo ku xidh in your computer. Tallaabada xigta waa in aan bilowno software iyo xiriiriyaan iPhone isticmaalaya USB ah cable-ka your computer. On interface ka bilaabay, guji macluumaad ku galeeysid-raacay bidix by Notes ku bar menu labaad.
Riix kaabta iyo dooro Notes ka fursadaha muuqda. Browse goobta aad rabto in aad badbaadin qoraalada ka dibna riix on kaabta iyo aad ku fiican tahay inuu tago!
Fast in kala iibsiga file
Ma ogolaan karo laba hab kala iibsiga
Sida caadiga ah ee suulka, had iyo jeer si loo hubiyo in aad dib ilaa qoraalo aad mar kasta oo aad u cusboonaysiiso iyaga oo kaliya si loo yareeyo fursadaha badiyay kuwa qoraalada muhiimka ah ee ay dhacdo dhibaatada ka jirta Iphone. Tani waxay gaar ahaan muhiim ah haddii aad tahay nooca in qof kii content muhiim ah in qoraalladan.
> Resource > iPhone > 3 ay xal u qoraalada iPhone gurmad kombiyuutarka